IBaotashan enamagumbi amathathu okulala i-Xiume Family Apartment - I-Airbnb
IBaotashan enamagumbi amathathu okulala i-Xiume Family Apartment
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe ongu秀梅
Ukufudumeza umgangatho kuvuliwe kwindlu yonke, kwaye igumbi ngalinye lokulala lixhotyiswe nge-air conditioning. Yonke indlu yanamhlanje kwaye ilula, inamagumbi okulala amathathu, amagumbi okuhlala amabini kunye namagumbi okuhlambela amabini, ii-suite ze-square mitha ezili-130, ezicacileyo ukusuka ngasentla ukuya ngasezantsi, kwaye igumbi ngalinye lokulala ligumbi lelanga elineefestile ezinkulu ze-bay. Ukuhlala kwisofa kwigumbi lokuhlala unokubona inqaba yebhakana. Izibonelelo zangaphakathi zigqityiwe kwaye iindawo zokulala zikhululekile. Ixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba ozenzekelayo, olungele ukuvasa nokupheka. Ukubonelela ngeebrashi zamazinyo ezilahlwayo, izinto zangasese, amanzi ashushu iiyure ezingama-24 kunye nekhowudi yokutshixa ukuze uzihlole ngokwakho. Ngaphantsi kwe-pagoda ephakamileyo kunye nokuqengqeleka ecaleni komlambo, kuya kukunika amava akhethekileyo kwaye angenakulibaleka, ukuthutha okufanelekileyo kunye nomgangatho wokuhlala. Inkonzo yamalungelo inokubonelelwa. Imizuzu elishumi kude neenyawo zeNtaba yePagoda, unokubukela umboniso okhanyayo weNtaba yePagoda ezantsi ngasemlanjeni, kwaye unokuhamba uye kwimarike edlamkileyo yasebusuku kumbindi weYan'an imizuzu elishumi ukonwabela umtsalane wendawo. busuku. Kuthatha imizuzu eyi-10 ukuhamba ukuya kwisikhululo sebhasi saseYan'an eMpuma, kwaye kukho iibhasi eziya ngqo eLiangjiahe, eNanniwan, eHukou Waterfall, kwaye uzive imbali ebomvu. Kukho iibhasi eziya ngqo kwindawo yangaphambili yeZaoyuan, iYangjialing Memorial Hall kunye nezinye iindawo ezingcwele ezikufutshane, eziluncedo. Ifumaneka kwintloko yeJialing Bridge, kukho izitishi zebhasi ze-21 kunye neNombolo ye-23 phantsi, okwenza uhambo lwakho lube lula kakhulu.
Imizuzu elishumi kude neenyawo zeNtaba yePagoda, unokubukela umboniso okhanyayo weNtaba yePagoda ezantsi ngasemlanjeni, kwaye unokuhamba uye kwimarike edlamkileyo yasebusuku kumbindi weYan'an imizuzu elishumi ukonwabela umtsalane wendawo. busuku. Kuthatha imizuzu eyi-10 ukuhamba ukuya kwisikhululo sebhasi saseYan'an eMpuma, kwaye kukho iibhasi eziya ngqo eLiangjiahe, eNanniwan, eHukou Waterfall, kwaye uzive imbali ebomvu. Kukho iibhasi eziya ngqo kwindawo yangaphambili yeZaoyuan, iYangjialing Memorial Hall kunye nezinye iindawo ezingcwele ezikufutshane, eziluncedo. Ifumaneka kwintloko yeJialing Bridge, kukho izitishi zebhasi ze-21 kunye neNombolo ye-23 phantsi, okwenza uhambo lwakho lube lula kakhulu.
Ibhedi enkulu eyi-1, \_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
Umbuki zindwendwe ngu- 秀梅
Nceda uzive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nam xa ufuna uncedo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yan'an